Wax walba oo ku saabsan Coobbi Memory Nadaafadda ayaa Mac
Waxaa jira codsiyo kala duwan oo loo isticmaalo nadaafadda xasuusta Mac OS X qalab dura. Xasuusta nadiif ah waa mid ka mid ah qalabka software kuwan. Xasuusta Nadiifi waxaa laga heli karaa ka App Store ama ka tiro ka mid ah goobaha mid si fudud u soo bixi kartaa oo loo soo dajiyo. Xasuusta Nadiifi waa mid ka mid ah codsiyada oo lacag la'aan ah ka helay online.
Codsiga waxaa inta badan laga filayaa in ay la adeegsadaa ka dib markii mid ka mid ah ayaa loo isticmaalaa codsiyada xasuus-degdeg ah ama kulan kuwaas oo inta badan la xidhiidha fragmenting ka blocks xasuusta lacag la'aan ah nidaamka ka mid ah. Haddii xasuusta habka ayaa kala qaybsameen, waxaa si fudud u horseedi karaa qaab yaraadeen. Software sida caadiga ah ka shaqeeya ka dib marka la bilaabay, laakiin aan had iyo goor. Waxaa la arkaa in ay codsiga kama dambaysta ah ee fiican oo xusuusta aad Mac ee. Waa codsiga ugu fiican in la isticmaalo kadib marka aad dhammayso isticmaalaya xasuusta (RAM) app degdeg ah ama ciyaarta. Waxa uu ahaa interface ka slickest iyo user saaxiibtinimo.
Part1: Sidee Memory Nadiifi Works
Qeybta 2: Faylal ay taageerayaan Memory Nadiif ah
Qeybta 3: Talooyinka Sida loo Isticmaalka Memory Nadiif ah
Xasuusta Nadiifi ka shaqeeya iyada oo Mac ee xasuusta firfircoonayn lagu xaaro. Intaa waxaa dheer, Memory Nadiifi waxay u badan ka dib markii ay khuseyso ku dhow app xoog ah in aadan la qorsheeyo in aan si deg deg ah ay mar kale isticmaali saacado yar gudahood. Si kastaba ha ahaatee, way wanaagsan tahay in la fahmo in ay geedi socodka ka mid ah nadiifinta xasuusta, ka weyn Macs hoos u dhigi karaan ilaa geedi socodkan waxa weeye in ka badan. Software waxaa loo qoondeeyey in sidan oo kale in aad awood u ogaano tirada xasuusta lacag la'aan ah aad ku lahaa ka hor ordaya Memory nadiif ah iyo sidoo kale ka dib markii a. Tusaale ahaan, haddii adiga lagaa soo ciyaaray kulan ka dibna waxaa la joojiyo, barnaamijka hayn doonaa xusuusta blocks ee loo hayaa. Waa lacag la'aan kartaa ilaa ku dhowaad 1GB ee RAM codsiyada kale. Marka xasuusta free hoos baxayay marinkii la eego ama baahida marka aad baxdo app ah, waxaa jira goobo kuwaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah u ordaan Memory nadiifi.
Waxaa jira tiro ka mid ah files in la tirtiro kara software Memory Nadiifi arrin.
Binaries Fat iyo macluumaad kale oo badan oo aan loo baahnayn
Qeybta 3: Talooyinka Isticmaalka Memory Nadiif ah
Nadiifinta aad Mac isticmaalaya Memory nadiif ah waa loo baahan yahay tan iyo markii ay kor u dadajiyaa aad Mac ayaa qaab ciyaareed. Si aad u kobciyo xusuusta nidaamyada aad u baahan tahay si ay u nadiifiyaan wadid aad u adag. Tani waa in isku dayga dib u tahay meel dheeraad ah oo ku wadid aad u adag. Files Kuwa in aan loo baahnayn yihiin habka waa in la tirtiro si loo kordhiyo baaxadda iyo sidaas daraaddeed kor loogu xusuusta aad Mac ee.
Waxa ugu horeeya waa in la furo ilaa Disk barnaamijkaaga Mac ee la dhisay-in Utility taas oo ah in guddi bidix. Waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in aad arkaysid ee tab Aid First hor riixaya badhanka Repair Disk ee geeska hoose-midigta ah ee Mac. Tani waxay markaas ku ordi doonaa baaritaan dheer oo aad Mac ee desktop waqti isku mid ah samaynta hagaajinta meesha looga baahan yahay. Si kastaba ha ahaatee mid wax ku ool ah si ay tani u noqon ahaan waa in ay leeyihiin xubin ka ah Mac iyo tan ugu muhiimsan oo lagu rakibay Memory nadiif ah.
CleanMyMac- nadiifi Mac
> Resource > Mac > Memory Nadaafadda ayaa Mac Coobbi